By Brenda Hobin & Phyo Ei Khine
As the country's leading real estate developer, the pandemic has brought forth many accelerated innovation and transformation. Like migratory birds, people are also searching for safer communities to bring up their families. Communities that offersaholistic experience, from responsible neighbours toacommunity that offers ample space, facilities and services to architecture and construction that can offer emotional, physical and mental stimulations and contributes to the general well being of the families.
အခုလိုကူးစက်ရောဂါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာ နာမည်ကြီး real estate developer အနေနဲ့ တီထွင်ဖန်တီးမှုတွေ၊ ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ငှက်တွေအသိုက်ပြောင်းကြသလို လူတွေလဲ ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ဝေးပြီး မိသားစုအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာတွေကို ရွှေ့ပြောင်းလာကြတယ်။ အိမ်နီးချင်းကောင်းတွေရှိတာကအစ တစ်နေရာတည်းမှာ ဝန်ဆောင်မှုအားလုံးရှိတာအလယ် စိတ်ရောကိုယ်ရော ကျန်းမာတဲ့ လူနေမှုပုံစံရှိတာအဆုံး အားလုံးအဆင်ပြေမယ့်နေရာတွေကို ရွေးချယ်လာကြပါတယ်။
"Avian migration isanatural miracle. Migratory birds fly hundreds and thousands of kilometres to find the best ecological conditions and habitats for feeding, breeding and raising their young. When conditions at breeding sites become unfavourable, it is time to fly to regions where conditions are better." - World Migratory Bird Day
Just like migratory birds, humans are looking for favourable conditions to feed, breed and raise their youngs. Over the last year, Pun Hlaing Estate has seenarise in occupancy in the estate. Residents in Yangon, both home-occupiers and renters, are looking forafavourable destination in Yangon to live, work and play. The rising demand for homes brought backaneed foragated and lifestyle community.
It is probably notacoincidence Pun Hlaing is also home to over 40 wildlife species.
ဆောင်းခိုငှက်တွေက ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ဂေဟစနစ်ရှိတဲ့နေရာတွေဆီ ကီလိုမီတာပေါင်းများစွာ ဖြတ်ပြီး ကလေးတွေကို အစာကျွေး၊ ကြီးပြင်းအောင်ထားကြပါတယ်။ တကယ်လို့ သူတို့လက်ရှိနေတဲ့နေရာက မကောင်းဘူးဆိုရင် ဒီ့ထက်ကောင်းတဲ့နေရာတွေဆီ ထပ်ပြောင်းရွှေ့ကြပါတယ်။
ငှက်တွေလိုပဲ လူတွေလဲ ကလေးတွေကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့ ကောင်းမွန်လုံခြုံတဲ့နေရာတွေကို ရှာဖွေကြ ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကစလို့ ပန်းလှိုင်အိမ်ရာမှာ နေထိုင်သူသိသိသာသာ များလာပါတယ်။ အိမ်ဝယ် သူတွေ၊ အိမ်ဌားတွေက နေဖို့အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့နေရာကို ရှာဖွေလာကြတယ်။ လူတွေက ကောင်းမွန်တဲ့လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ ကျန်းမာတဲ့လူနေမှုပုံစံကို နှစ်သက်လာကြပါတယ်။
သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကို နှစ်သက်သူတွေအနေနဲ့ ပန်းလှိုင်အိမ်ရာထဲမှာ ငှက်မျိုးစိပ်ပေါင်း ၄၀ ကျော်ရှိလို့ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Demand for turnkey property in low density community
"A turnkey property isareal estate asset that does not require any repairs or improvements and is completely move-in or rental ready. As their names suggest, turnkey properties are often sold and managed byacompany that specializes in purchasing and rehabbing under-market value properties on behalf of passive income investors." - Fortune Builders
As the pandemic strikes and affects billions of people around the world and in Myanmar, there wasaneed to findaturnkey property. Pun Hlaing has requests from people who just want to buy or rentaready to move in home. No repair works, no improvement and no finishing to delay the move-in process. Homes that has ample outdoor space and separate outdoor utility areas that allows the family to disinfect before entering the main house.
လူဦးရေထူထပ်မှု နည်းပါးတဲ့နေရာရှိ Turnkey Property
Turnkey property ဆိုတာက ထပ်ပြီးပြင်စရာမလိုဘဲ ဝယ်ပြီးအသင့်နေထိုင်နိုင်တာ (သို့) ဌားပြီးအသင့် နေထိုင်နိုင်တဲ့ အဆောက်အအုံမျိုးကို ပြောတာပါ။ Turnkey property တွေကို ရောင်းတာ၊ ဝယ်တာ၊ ဌားတာစတာတွေကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကိုယ်စား ကုမ္ပဏီကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
ကူးစက်ရောဂါကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူသန်းပေါင်းများစွာဟာ နေထိုင်ရေးမှာ အခက်အခဲတွေရှိလာပြီး Turnkey property တွေကို ရွေးချယ်လာကြပါတယ်။ ပန်းလှိုင်အိမ်ရာက အိမ်တွေက နေဖို့ ထပ်ပြီးပြင်ဆင် ရတာတွေ မရှိဘဲ အဆင်သင့်နေထိုင်နိုင်တဲ့အတွက် အိမ်ဝယ်ချင်သူတွေ၊ ဌားချင်တဲ့သူတွေ အကြို က်တွေ့ကြပါတယ်။ အိမ်တွေကလည်း အပြင်ဘက်မှာ နေရာကျယ်တွေပါတဲ့အပြင် utility room ကလည်း သီးသန့်ရှိတော့ အိမ်ထဲမဝင်ခင်ဆေးကြောသန့်စင်တာတွေ လုပ်နိုင်လို့ မိသားစုကျန်းမာရေး အတွက် စိတ်ချရပါတယ်။